lundi, 01 juillet 2019 20:50
Kitra - Copa America 2019: Hatao ny alarobia sy alakamisy izao ny lalao manasa-dalana
Ny lalao manasa-dalana voalohany amin’ny alarobia 3 jolay izao dia hihaonan’i Brezila amin’i Arzantina, ao amin’ny kianja “Estádio Governador Magalhães Pinto” ao Belo Horizonte, ao amin’ny fanjakan’i Minas Gerais any Brezila.
Ny lalao manasa-dalana faharoa hatao amin’ny alakamisy 4 jolay kosa dia hifanandrinan’i Perou amin’i Chili. Lalao tanterahina ao amin’ny “Arena do Grêmio” any Porto Alegre, Brezila.
Ny kianjan’i Maracanã ao Rio de Janeiro no hampiantrano ny lalao famaranana eo amin’ireo ekipa roa tonta tafavoaka mpandresy amin’ny manasa-dalana ; hatao amin’ny alahady 7 jolay 2019.
lundi, 01 juillet 2019 20:44
Famoahana voka-pifidianana: Ho tapaka ny lalana mandalo ny HCC Ambohidahy
Ho tapaka ny fifamoivoizan’ny fiara amin’ny lalana Wast Ravelomoria (Comoris), ny fidinana Restaurant La Varangue, ny lalana Rabobalahy, ary ny fiakarana manomboka eo amin’ny Faritany, ny talata 2 jolay 2019 amin’ny 2 ora tolakandro, mandra-pahavitan’ny lanonana ara-pitsarana hamoahan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana etsy Ambohidahy – Antananarivo, ny vokatra ofisialy ny fifidianana solombavambahoaka natao tamin’ny 27 mey 2019.
lundi, 01 juillet 2019 20:42
Ambanja: Vehivavy mpitana “bar” maty notifirin’ny jiolahy
Nitrangana fanafihana mitam-basy teo Ankatafahely – Ambanja ny alahady 30 jona tokony ho tamin’ny 7 ora hariva. Vehivavy iray, efa loa-jafy, mitazona toeram-pisotroana, no nisy nanafika tao an-trano fonenany.
Teo ampanasana ireo zafikeliny telo, tao amin’ny trano fidiovana izy, no niditra ankeriny ireo jiolahy, sady nanery azy hiditra tao an-trano, raha nambaran’ireo zafikeliny.
Efa nitsirara sady nihoson-dra tao an-trano i Marie, no hitan’ny olona, izay taitra tamin’ny feom-basy nipoaka in-dray mandeha. Niditra tao amin’ny lamosiny ny bala ary nivoaka taty anoloana.
Nikorontana ambony ambany ny entana tao an-trano. Tsy mbola voafaritra mazava ny zavatra nalain’ireo jiolahy.
Marie, sy zafikeliny telo, izay mbola kely no tao an-trano tamin’ny fotoana nitrangan’ny fanafihana.
Eo ampelan-tanan’ny Polisy ny raharaha, izay nanokatra fanadihadiana.
lundi, 01 juillet 2019 16:53
Fanambaram-pananana: Nanatanteraka ny azy ireo tomponandraikitra eo anivon’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka
Nifampitaona nanao ny fanambaram-pananana teny amin’Ivotoeran’ny Bianco Ambohibao ireo Tale Jeneraly sy Tale ary tomponandraikitra eo anivon’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka ny 28 jona 2019 teo.
Lalàna velona no manery ny tsy maintsy anaovan’ny mpiasam-panjakana ambony sy olom-boafidy hanao fanambaram-pananana, ka nanatanteraka ny adidin’ireo tomponandraikitra ny teo amin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, sy ho fijoroana amin’ny fahamarinana sy ny mangarahara eo amin’ny fitantanana.
lundi, 01 juillet 2019 16:43
Kitra – CAN 2019: Ireo fandaharan-dalao anio
Lalao efatra no tanterahina anio ka amin’ny ora mitovy isaky ny mandeha no anatontosaina ny lalao roa.
Amin’ny 7ora alina: Afrika Atsimo # Maroc /Namibia # Côte d’Ivoire
Amin’ny 10 ora alina: Tanzania # Alzeria / Kenya # Sénégal
lundi, 01 juillet 2019 16:10
Ivato: Ikarohana « hangar » ireo fiaramanidina vao tonga ampiasain’ny Foloalindahy
Ikarohana « hangar » hametrahana azy eny Ivato ireo fiaramanidina sy helikopetera vao tonga ampiasain’ny Foloalindahy.
Ny « hangar » an’ny Tiko Air, ipetrahan’ny fiaramanidina ATR 42 an’ny orinasa Tiko, sy ny an’ny orinasam-pitanterana anabakabaka Madagasikara Airways no nisy iraka nijery teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato omaly alahady 30 jona 2019.
Serasera: Fakankevitra momba ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny serasera
Tanterahina manomboka androany Alatsinainy 1 Jolay 2019 ao amin'ny Lapan'ny Faritra Atsinanana Toamasina ny fakankevitra momba ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny serasera ho an’ny Faritra Atsinanana, Alaotra-Mangoro ary Analanjirofo.
Ny tanànan'Antsirabe kosa no hampiantrano ny fakankevitra ny ho an’ireo solontena avy any amin’ny Faritra Vakinankaratra, Analamanga, Itasy, Bongolava, Menabe ary Melaky ny Alarobia 3 Jolay 2019 izao.
lundi, 01 juillet 2019 16:02
Miandrarivo Ambanidia – Antananarivo: Tra-tehaka ny mpangalatra ranon’ny Jirama
Saron’ny sampana mpanao «ratissage» ao anatin’ny foibem-pitondrana misahana ny fiarovana ny fidiram-bolan’ny rano na ny DPRO eo anivon’ny orinasa JIRAMA, io maraina io ny halatra rano eny amin’ny fokontany Miandrarivo Ambanidia, Boriborintany faharoa Antananarivo Renivohitra.
Niaiky ny halatra nataony ilay tokantrano, ary mbola nilaza ilay renim-pianakaviana, fa efa ho roa taona izao no nanaovany io fisintonan-drano tsy miankina amin’ny «compteur» io. Tato anatin’ny valo volana kosa, hoy izy no nivarotany izany rano halatra izany amin’ny mponina manodidina, ka 50 Ariary ny iray «jericane» mavo, ary adiny dimy isan’andro, eo anelanelan’ny amin’ny 5ora sy sasany ka hatramin’ny 8 ora maraina, sy amin’ny 5 ora sy sasany hariva ka hatramin’ny 8 ora alina no misokatra ny fivarotana rano eo am-bavahady.